विघटन | Nagarik News - Nepal Republic Media
पुसको जाडोमा पारिलो घाम ताप्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । त्यसमा पनि बिहानीको मौसममा तातो चिया सुर्क्याउँदै साथीहरूसित गफगाफ गर्नुको आनन्द त झन् बयान गरी साध्य छैन । यसैले म पनि यही मनसायले नजिकैको चोकमा रहेको चिया पसलतिर सधैंझै पुगे । केही नियमित ग्राहकहरू चिया गफमा मस्त थिए।
सबैको अनुहारमा सधैंझै चमक र उत्साह भने कति पनि थिएन । एक आपसमा कुरा गर्दै थिए– भर्खरै भएको संसद विघटनको।
चन्द्रले दुखेसो पोख्यो– नेताहरूले जनतालाई धोका दियो ।
बुद्धिले थप्दै भन्यो – झन् हो नि यत्रो विश्वास गरेर पठाएको त उहीँ कुर्सीको लुछाचुँडी पो गर्नु रहेछ । संसद नै विघटन गर्यो स्वार्थमा।
मलाई चूपचाप देखेर जितले भन्यो– साहित्यकारज्यू, तपाईंको लेखरचना किन आजभोलि अलिक कम आउन थाल्यो नि ?
मैले यसो सोचेर उतर दिँदै भने – के हुन्थ्यो नि उहीँ विघटनले।
सबैले मेरो कुरा सुनेर छक्क पर्दै सोधे – हैन कसरी हुन्छ यस्तो ?
मैले जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्दै भने– संसद किन विघटन भो ? आखिर समस्या त विचारमा थियो नि । त्यस्तै मेरो मन दिमागमा पनि अन्तारिक किचलोले लेख्न नसकेर विघटनकै ताल छ।
मेरो कुराले गलल्ल हाँस्दै भन्यो – सबैले हँसाउनुहुन्छ। कहिले त साहित्यकारज्यू पनि हाहाहा ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७७ १४:२० सोमबार